အတိတ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအင်္ကျီများကဲ့သို့အဝတ်အစားတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအကျွမ်းတဝင်, သူမချမ်းနေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်လေတိုက်အဆင်းလှသောလိင်, ဒါပေမယ့်လည်းယောက်ျားမသာဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးစကတ်၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏သမိုင်းနက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်နေဆဲ, ဒါပေမယ့်ပြီးသား V-IV ထောင်စုနှစ်ဘီစီ၌, ဗီရို၏ဤဒြပ်စင်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ယောက်ျားမိန်းမတို့အဘို့အင်္ကျီအတွက်ဝေမျှမပေးခဲ့ပါဘူးပထမဦးဆုံးအကြိမ်။ ဒါဟာလိင်, ဒါပေမယ့်လည်းအသက်အရွယ်, လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုသာအရေးမလုပ်ခဲ့။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ရှိသမျှနီးပါးတူညီဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဗီရိုတစ်ခုကိစ္စ၎င်း၏နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲစတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်ကအင်္ကျီ၏ဖြစ်ပျက်မှု၏အလယ်ခေတ်သမိုင်းအတွက်သာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂန္အမျိုးသမီးအင်္ကျီ၏ဇစ်မြစ်ဟာ XVI ရာစုအကုန်မှာစပိန်နိုင်ငံတွင်စတင်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ်ခါးပန်း၏အသုံးအများဆုံး element ကအခမ်းအနားကြိုဆိုဧည့်သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အင်္ကျီများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, စဉ်တွင်မင်းသမီးဆင်မြန်းဝတ်ဆင်။ ရုံ corset အပေါ်တပြင်လုံးကိုမတ်မတ်၏ခွဲခြာနှင့်အင်္ကျီ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူတက်လာသောကိုသိပေမယ့်သူမကအရမ်းကျယ်ပြန့်တယ်ပါဘူး။ စကတ်မိန်းမရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ဂျာကင်အင်္ကျီပြောင်းလဲနေတဲ့ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များဖန်တီး, ဒါပေမယ့်လည်းအလယ်ခေတ်အတွင်းစျေးကြီးသောတစ်ရှူးပေါ်တွင်ကယ်ဖို့မသာခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်, ဒါပေမယ့်မြင်းတပ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်အမျိုးသမီးအဝတ်များ၏သမိုင်း ... မြင်းဆံပင်အင်္ကျီအလွန် fluffy နဲ့ volume ဖြစ်ပါသည်အောင်, အထည်များ၏မျိုးစုံအလွှာအကြားတစ်ဦး Filler အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဇိမ်ခံမတ်မတ်တူပေမယ့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလေးချိန် horsehair အမျိုးသမီးအင်္ကျီအတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
မိုးသည်းထန်စွာစကတ်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် wireframe ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်ကွဲပြားခြားနားသောချင်းအမျိုးသမီးများပိရမစ်ကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းပုံ hoops အတွက်ခါးမှာ fixed ဖြစ်. , ထိပ်ကသူတို့လှပသောပိတ်ထည်များနှင့်ဖုံးလွှမ်း။ ဒါကစကတ်ပု corset တိုက်ရိုက်ပူးတွဲဒါကြောင့်စားဆင်ယင်အမျိုးသမီးတွေအကူအညီမပါဘဲမပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အီတလီနှင့်ပြင်သစ်သာမန်သိုးမွှေးနှင့်အတူကျပ်တင်ပါးဆုံရိုးခေါင်းအုံးနှင့်အတူသူတို့ကိုအစားထိုး, အဆင်မပြေမိုးသည်းထန်စွာ frames များကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဖက်ရှင်အဝတ်များ၏သမိုင်းထိုကဲ့သို့သော option ကိုကြာရှည်မခံခဲ့ပါကြောင်းဖော်ပြသည်။ ယခုပင်လျှင်အဆိုပါ XVII ရာစုအတွက်ဖြောင့် silhouette နှင့်အတူမော်ဒယ် drapery သို့မဟုတ်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့အမြီးနှင့်အတူအလှဆင်ရှိခဲ့သည်။ Layer ဟာတဆယ်အလွှာ၏စကတ်အတော်လေးအမြားအစဉ်းစားခဲ့ထိုကဲ့သို့သောအချိုးအစားရရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Vogue စကတ်-ခေါင်းလောင်း၌တည်၏။ ပထမဦးစွာတူညီ frames များကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအသံအတိုးအကျယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူတို့အစားထိုးခဲ့ကြသည် Petticoats crinoline ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တကယ်တော့: အ IX ရာစုအတွက်အဝတ်အဖြူထက်အခြားမည်သည့်အရောင်ဖယ်ထုတ်ဝတ်ထား, အမျိုးသမီးဖက်ရှင်တစ်ခုတွက်ရင်သောညှဉ်းဆဲခြင်းကိုနှင့်ကြော့ရှင်း။ အလိုအလျောက်ပြည်တန်ဆာအကြားအဆင့်တစ်ရောင်စုံအင်္ကျီအတွင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ဒါပေမယ့်ကြိုဆိုသည့်တင်ပါးပေါ်အလေးထားဒါကြောင့်တစ်ဦးပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားအတူဝတ်ဆင်သောအင်္ကျီကို - အထူးအခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့လိပ်။
Cecilia Sorel ၏လမ်းကြောင်းသစ် built-in ကို "ခြေဆွံ့" စကတ်အသက် 20 အရွယ်, မာရိ, Quant အားဖြင့်တိုတောင်းမော်ဒယ် Pull နှင့်ကျော်ကြားသော Twiggy အားဖြင့်ခေတ်စားလာ, ရှည်လျားသောမြိတ်နှင့်အတူအဝတ် - အရာသာပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဗီရို၏ဤဘာသာရပ်တို့ထိ! ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီတော့ယနေ့တိုင်းဖက်ရှင်သူမက likes သောအဝတ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, နောက်ဆုံးရာစုအစမှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့သည်။ အဝတ်အတွက်တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်ဒူးဖျောက်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ, ပိုမိုအဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဖြောင့်နှင့် A-frame ကိုကျစ်နှင့်ဇိမ်ခံ, ရှည်လျားတိုတောင်းသောသိပ်သည်းခြင်းနှင့် airy, ရိုးရှင်းပြီး Multi-အလွှာ, မိုနိုခရုမ်နှင့်အရောင် - အဝတ်တစ်ဦးရွေးချယ်မှုသာကိုမြည်းစမ်းနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကိန်းဂဏန်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကန့်သတ်ထားသည်။
အဝါရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ကိုအဘယ်သို့ မှစ. ?
Earflaps နှင့်အတူဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Megan Fox ကနှင့်ဘရိုင်ယန်အော်စတင်အစိမ်းရောင်တတိယအကြိမ်မိဘများဖြစ်လာခဲ့သည်
ဆံပင်ထဲကညွှတ် - Options အားလုံးကိုဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေ
အစားအသောက် "5 ဇွန်း"
က Natalia Vodianova လူမှုရေးလျှောက်လွှာ Elbi စတင်ခဲ့နှင့်၎င်း၏ cryptocurrency ထူထောင်ထားပါတယ်